Offensive Shape (အသင်းလိုက်နေရာယူမှု) | Soccer Guides | TkSports
Offensive Shape (အသင်းလိုက်နေရာယူမှု)
Soccer Guides Facebook Page မှ ပြန်လည်ကူးယူတင်ပြပါသည်။
အသင်းလိုက်နေရာယူမှုအကြောင်းကို နှစ်ပိုင်းခွဲပီး ပြောပါ့မယ်… Offensive shape နဲ့ Defensive shape ဆိုပီး ခွဲရေးမှာပါ… အခု Offensive shape ကိုအရင်ပြောမယ်… နံပါတ်နဲ့ Position တွေ လွဲတယ်ထင်မှာစိုးလို့4နဲ့5ကို Side Back တွေလို့ မှတ်ထားပီး2နဲ့3ကို CB လို့ သိထားပေးပါ…6/ 8 က CM /9က SS / 10 က CF ပါ/ 7/11 ကတော့ Winger တွေလို့ မှတ်ပေးပါ… 4-4-2 ကို အခြေခံပြောမှာပါ…
GK က စပြောရရင် အသင်းက တိုက်စစ်ဆင်နေချိန်မှာ ဂိုးအတွင်းထဲမှာ နေတာထက် ဧရိယာအစပ်နားထိ တက်နေသင့်ပါတယ်… Counter ပြန်အတိုက်ခံရတဲ့အခါ CB တွေ ဘောလုံးအဖျက်မှာ ကူသင့်ရင် ကူလို့ရပါတယ်… မြင်ဖူးကြမှာပါ… ဂိုးသမားတွေအပြင်ထွက်ပီး Slide ထိုးဖျက်တာတွေပေါ့… ဂိုးထဲမှာနေရင် ပြေးတက်ဖို့အတွက်နောက်ကျနိုင်ပါတယ်… တစ်ခုသတိထားရမှာက ရှေ့တက်လွန်းရင်လည်း ကွင်းလယ်လောက်ကနေ တိုက်ရိုက် ကန်သွင်းခံရနိုင်ပါတယ်… ဒါတော့ သတိထားပါ…
CB တွေဟာ အသင်းလိုက် တိုက်စစ်ဆင်ချိန်မှာ ထောင့်ကန်ဘော ကလွဲလို့ တစ်ဖက် Box အထိ မလိုက်သင့်ပါဘူးး… ကွင်းလယ်စည်းအထိ လိုက်တက်မယ်… တိုက်စစ်ကို အရံလုပ်ပေးရုံပါပဲ… အဲဒီအချိန်မှာ တစ်ဖက်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူးတစ်ယောက်ကလည်း ကွင်းလယ်လောက်မှာ ကျန်ခဲ့မှာဖြစ်လို့ တစ်ယောက်က Marking လုပ်ထားရမှာပါ… အကယ်၍ Counter ပြန်လုပ်ခံရရင်လည်း ကိုယ့်အရှေ့မှာ ကွင်းလယ်လူတွေရှိသေးတဲ့အတွက် အလိုက်သင့်နောက်ဆုတ်ပီး ခံစစ်နှစ်ထပ်လုပ်ထားရုံပါပဲ… (ပုံထဲမှာ2က စည်းမကျော်ပါဘူး… သူ့လူက ကိုယ့်ကွင်းဖက်အခြမ်းကို ကျော်နေရင် စည်းကျော်ပီးနေလို့ရပါတယ်… လူကျွံထောင်ချောက်လုပ်တဲ့သဘောပါ… တကယ်လို့ ပြိုင်ဖက်က ကျော်မနေဘူးဆိုရင် ဒီပုံစံလေးနေတာကောင်းပါတယ် ယှဉ်ပြေးရင် မလိုက်နိုင်မှာစိုးလို့ပါ) တကယ်လို့ တစ်ဖက်အသင်းက Counter attack ကို အလယ်ကြောကမဟုတ်ပဲ တောင်ပံတွေကနေ ဖောက်လာတယ်ဆိုရင် အဲဒီကစားသမားဆီကို CB တစ်ယောက်က လိုက်ဟန့်ရလိမ့်မယ်… အဲဒီလိုဟန့်ထားချိန်မှာ ကျန်တဲ့ ကိုယ့်အသင်းဖော်တွေက Defence zone ထဲကို အကုန်ပြန်ဆင်းပါလိမ့်မယ်…( Defensive Shape တွင်ရေးပါမည်)…
Side back နဲ့ Winger တွေအနေနဲ့ တိုက်စစ်ဆင်ချိန်မှာ တောင်ပုံက 7/11 နဲ့ combo မိဖို့လိုတယ်… ပုံသေမရှိပေမယ့် 7/11 တွေကို Corner ထိမသွားခိုင်းပဲ LB RB က Corner ထိတက်ပေးပါ… 7/11 တွေ ဘောလုံးရတဲ့အခါ နည်းလမ်းသုံးခုရှိပါတယ်… Box ထိပ်တွေကနေ ကန်သွင်းမလား? Corner ဖက်ကို ဘောလုံးခင်းပေးပီး LB RB တွေကို ဂိုးရှေ့ဖြတ်တင်ခိုင်းမလား? တိုက်စစ်ကို ဖန်တီးပေးမလား? Attacking Winger စစ်စစ်ဆော့နိုင်တယ်ဆိုရင် Box နားတစ်ဝိုက်ကနေ ကန်သွင်းပါ… ငဒိုပွဲတွေကြည့်ဖူးရင် သိသာစေမှာပါ… Counter ပြန်လုပ်ခံရတယ်ဆိုရင် LB RB တွေဟာ မြျှားအတိုင်း တောက်လျှောက်ဆင်းရမှာဖြစ်ပီး တကယ်လို့ Counter attacker က ကိုယ့်ထက်မြန်နေရင် သူ့ကို CB က ပြေးဟန့်ထားမှာဖြစ်လို့ ကိုယ့်အသင်းရဲ့ Box ဆီကိုပဲ ဦးတည်ပြေးပါ… ကိုယ့်နောက်ကနေ 7/11 နဲ့ MF တွေ လိုက်ဆင်းလာပါလိမ့်မယ်… ဒီနေရာက နည်းနည်းပင်ပန်းပါတယ်…
MF တွေဖြစ်တဲ့ 6/8 ဟာတိုက်စစ်ကို စတင်ပံဖော်သူတွေဖြစ်တတ်ပီး ကစားရကျပ်လို့ ကစားကွက်ချဲ့ထွင်တဲ့အခါ တောင်ပံတွေဆီကို long ball တွေပို့ပီး ချဲ့ထွင်ပါ… တိုက်စစ်ဆင်တဲ့အချိန်မှာ ကစားသမားတွေနဲ့ Triangle ပုံစံကျအောင်နေပါ… ဒါမှ လူပေးရတာပိုအဆင်ပြေတာမို့ပါ… 6/8 တွေဟာ Final third ရဲ့ အလည်ဗဟိုကနေ တိုက်စစ်မှူးတွေရဲ့နောက်က Support လုပ်ပေးပီး 7/11 တွေအတွက် Space ရှာပေးရပါတယ်… ဒါမှ 7/11 တွေက ဂိုးကန်ခွင့် လွတ်လွတ်ကင်းကင်းရမှာပါ… နောက်တစ်ချက်က Through ball ခင်းပေးနိုင်မယ့် လမ်းကြောင်းတွေကို ကြိုတင်မြင်ထားပါ… အရှေ့လိုက်တက်လာတဲ့ LB RB တွေကိုလည်း ခင်းပေးနိုင်သလို တိုက်စစ်မှူးတွေကိုလည်း ခင်းပေးနိုင်ပါတယ်…
တိုက်စစ်မှူးတွေအနေနဲ့ Movement လုပ်တဲ့အခါ Marking မိမှာကို မကြောက်ပါနဲ့… ကိုယ့်ကို marking လုပ်ထားသူကို ဖိအားပေးနိုင်အောင်ပဲ ကြိုးစားပါ… တိုက်စစ်မှာဆို SS ရဲ့ သဘောက အသင်းဖော်တွေ ဂိုးကန်သွင်းခွင့်ရအောင် ထောက်ပံ့ပေးဖို့ပဲ… ကိုယ်လှုပ်ရှားလိုက်လို့ ဟာကွက်ဖြစ်လာဖို့ပဲ လိုတယ်…ဂိုးသွင်းဖို့ကတော့ မပြောတော့ပါဘူး… ရရင် ရသလို ကန်ရမှာပါပဲ… CF ကိုပြောရရင်တော့ လူကျွံထောက်ချောက်ကို မြှားတတ်ဖို့လိုပါတယ်… ဘောလုံးအပေါ် အာရုံစူးစိုက်ဖို့လိုပါတယ်… တိုက်စစ်ဆင်ချိန်မှာ ကိုယ့်ဆီကို ဘောလုံးက အနေအထားမျိုးစုံနဲ့ နေရာစုံကနေ လာနိုင်ပါတယ်… ကိုယ့်အလုပ်က ပိုင်ရင် ဂိုးထဲကန်ထည့်မယ်… မပိုင်ရင် ပိုသေချာတဲ့သူကိုပေးမယ်… ဒါပါပဲ… ပုံလေးကိုကြည့်ရင် နေရာယူပုံလေးတွေကို သိမှာပါ… အသင်းလိုက်လှုပ်ရှားမှုကနေ နားလည်မှုရှိရှိ လေ့ကျင့်ထားရင် အဆင်ပြေပါတယ်… ဘယ်လိုအနေအထားမှာ ဘယ်သူက ဘယ်နေရာမှာ ရှိရမယ်ဆိုတာ သိအောင်ပဲ ပြောပြတာပါ…
နောက်ထပ် Defensive Shape ထပ်လာပါ့မယ်…
Author – JD
Facebook Page – Soccer Guides
Featured Image by S. Hermann & F. Richter from Pixabay
jd, offensive shape, Soccer Guides